Carrots maka ike na ọrịa ndị ọzọ nke ụmụ mmadụ: uru maka ahu, nsogbu dị aṅaa ka ahụ ike ga - eme, otu esi eji mee ihe na ihe dị mma bụ ihe ọṅụṅụ ihe ọṅụṅụ? - Akwukwo nri - 2020
Karọt bụ ihe oriri na-acha odo odo nke nwere uto ụtọ. Ikekwe onye ọ bụla nụla banyere uru nke carrots, ebe ọ bụ na a maara obere nsogbu ya, n'ihi na dịka ụmụaka, anyị maara na akwụkwọ nri niile dị mkpa maka ahụ ike.
Ndị nna nna anyị makwaara ihe dị mkpa carrots bụ maka ahụ mmadụ. Karịsịa, n'echiche ha, ihe ọkụkụ ahụ nwere mgbọrọgwụ nwere mmetụta dị mma na ike nwoke na obi ike. Ma olee kpọmkwem otu?
Na a sie (stewed) ụdị
Nkwekọrịta maka iji
Kedu ihe dị mma maka ahụ?
Ihe na-emerụ ahụ maka ahụ ike
Iji wusie usoro obi
Site na ọrịa imeju
Iji meziwanye ike
Na mmiri ara ehi
Ihe ọṅụṅụ Karọ ọhụrụ
Atụmatụ nke mejupụtara chemical ahụ
Njirimara ike nke mgbọrọgwụ bụ ihe na-abaghị uru ma bụrụ 32 kcal / 100 g, Otú ọ dị, ihe ndị mejupụtara ya dị oké ọnụ ahịa. Na nke a, ọ gaghị ekwe omume ịghara imesi ike mkpa carrots kpọmkwem maka ahụ ike ụmụ nwoke, karịsịa maka ndị nnọchianya nke mmekọahụ siri ike na-egwu egwuregwu.
Otu akwukwo akwukwo ozo nwere ihe kariri 2 grams nke eriri, nke bu ihe ndabere maka nhazi nke ikuku.
Tinyere ihe ndị ọzọ, 100 grams nke carrots nwere:
Abụba - 0,1 g
Carbohydrates - 6.9 g.
Beta-carotene, nke bụ otu n'ime mmiri carrots, na-ebelata ihe ize ndụ dị iche iche nke ịmepụta ụdị ọrịa dị iche iche, nakwa ịbawanye nkwụsi ike nrụgide. Nke a bụ ihe nwoke na-esote onwe ya.
Ihe ndị ọzọ ịnweta mmiri, gụnyere vitamin, na ngwongwo ihe oriri dị ka ndị a.:
Zinc, nickel, fluorine, ígwè, magnesium, cobalt, ọla kọpa, ayodiin na potassium.
Vitamin B, Nke, C, E, K.
Nakwa na karọt na mmanụ ndị dị mkpa, ekele nke o nwere mmetụta dị mma na mmetụta dị mma n'ahụ ọnọdụ ụmụ mmadụ.
Site n'enyemaka nke amino acids na leucine sulphur, a na-emewanye ihe omumu nke mmadu, nke na eme ka ihe a di oke mkpa n'oge nkuzi. Mmetụta nke carrots na ahụ e ji esi ya na ụdị ọdịdị dị iche nwere ike ịdị iche.
Ndị ọkà mmụta sayensị si na Arkansas Institute egosiwo na sie ma ọ bụ gwakọta carrots dị nnọọ uru karịa raw, n'ihi na ha nwere ugboro atọ antioxidants. Carrots na nke a dị iche iche bara uru karịsịa maka ndị chọrọ normalize metabolism ma wepu nsị si n'ahụ. Ọzọkwa, sierots carrots mma mgbaze, na-edozi ọgụ, na-ekpochapụ ọrịa nke imeju na akụrụ, na-ebelata ihe ize ndụ nke ọrịa cancer ma jiri ya mee ihe iji gbochie afọ ntachi na ọnyá afọ.
Carrots dị n'ụdị dị irè bara uru karịsịa maka ndị chọrọ imeziwanye ike ha. Otú ọ dị, a ghaghị ịghọta ya iji weghachite ike nke akwukwo ihe oriri a aghagh i agha kwa ubochi.
Nri akwukwo nri di iche iche nwere otutu ihe ndi ozo di nma; ndi na adighi nduzi kwadoro tinye otu tablespoon nke ihe obula ohia na mmanu achoro ka ha na aru ha ma nwee mmetuta di mma.
Exacerbation nke cancer na duodenal ọnya afọ.
Ọnụnọ nke usoro mkpali na obere eriri afọ.
Gastritis na ụba acidity nke afo.
Ịkpụ nkume akụrụ.
Na-enyere aka melite ogo osisi. Ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtala na ndị na-ahọrọ ka carrots dị ka nri adịghị enwe nsogbu na nsogbu ndị metụtara mmepụta.
Ọ bụ ngwá ọrụ magburu onwe ya iji mee ka mbelata ahụ dị elu, na - eme ihe dịka onye inyeaka maka ịgbake ahụ ngwa ngwa site na ọzụzụ ọzụzụ dị egwu.
Na-egbochi nrịanrịa nke ụfọdụ ọrịa nke anya (a cataract na glaucoma).
Mmetụta dị mma na-ebelata ihe ize ndụ nke ọrịa obi.
Ga-enyere gị aka ịlụ ọgụ.
Ọ na - eme ka mgbasa ọbara na - emegharị, ma, dị ka a rụpụtara, arụ ọrụ erectile.
Na-akwalite mmepụta nke testosterone na ahụ.
Na-emekwu ka agụụ mmekọahụ nwee mmekọahụ, si otú a na-eme ka ị na-enwe mmekọahụ.
N'ihi na a na-eji carrots eme ihe mgbe nile, a na-eme ka ala nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ dịwanye mma, nke gosipụtara n'ụzọ doro anya na nchebe nke anụ ahụ nke nwoke megide ọrịa ndị a na-ebute site ná mmekọahụ.
Otú ọ dị, dị ka ngwaahịa ọ bụla, carrots ga-eji amamihe mee ihe. Ejila ya mee ihe n'iji mgbidi a bara uru.
E kwuwerị, na-ejighị ya mee ihe, ọ pụkwara ịkpata nsogbu ahụ ike:
Na-akpata nsị, isi ọwụwa, nro ụra, ikuku.
Ụdị mmeghachi omume dị iche iche.
Ịba ụba nke carrots nwere ike ịmepụta ụcha na ụkwụ na n'ọbụ aka.
Njirimara nile nke carrots na-eme ka o kwe omume iji ya na nnukwu efere ndị nwere mmetụta ịgwọ ọrịa na ahụike ụmụ nwoke. Anyị na-etinye uche gị na ntụziaka ole na ole na ị ga-ejikọta na nri kwa ụbọchị nke nwoke ọ bụla.
Iji gbochie mmepe nke ọrịa ọrịa obi, nakwa iji mee ka ahụ ike dị ike, ọ ga-ezuru iji dozie ụdị na-esonụ nke efere efere.
Karọt - 650 g.
Mmanụ aṅụ na mmiri mmiri - abụọ tablespoons.
Sunflower ma ọ bụ olive mmanụ - abụọ tablespoons.
Ose, nnu ma ọ bụ cumin - nụrụ ụtọ.
Nutmeg - tinye ntụtụ. Usoro nkwadebe:
A ghaghị ịsacha Carrots, wepụ akpụkpọ ahụ, bee n'ime mpekere ma tinye ya na nnukwu efere. Iji mee ka mpempe akwụkwọ na-esite na oliv ma ọ bụ mmanụ sunflower, jikọta ndị ọzọ na mmanụ aṅụ site na ịtinye ngwakọta na carrots.
Cumin dị ka ọ ga-ekwe omume ịkwanye na mgbochi, na-ewetara ya ntụpọ. Na enweghị mgbochi, ị nwere ike ime nke ọma na ntanị na-agbagharị na mgbidi. Iji mee nke a, debe osisi cumin n'okpuru mgbidi ma kpochapụ ha n'elu mkpịsị na-asọgharị - nke a ga-ejide mkpụrụ osisi ahụ a gwakọtara.
Na akpa na carrots na mmanụ aṅụ, tinye cumin dị iche iche ngwa nri, mgbe ahụ mix ihe niile nke ọma.
Tinye ihe ngwakọta na mpempe mmiri ma na-akpọ nkụ na oven ruo minit 40-45 na okpomọkụ nke ruo 180 Celsius.
Ndị na-eri nri na-ekwu na ha ga-eri nri a dị ka nri n'akụkụ. Otú ọ dị, anaghị eri ihe karịrị 200g nri kwa ụbọchị. Site na isoro ntuziaka ndị a, maka ọnwa ole na ole, i nwere ike iwusi obi na arịa ọbara ike.
A na-agba ndị ọrịa nwere ọrịa ume ume ime ihe oriri na-edozi ahụ, na-ewepu ngwa nri na ihe mgbakwunye ndị ọzọ. Uru kachasị na nke a na-eweta ngwakọta nke cheese cheese na carrots, bụ nke usoro mgbake na-amalite n'ime mkpụrụ ndụ imeju. Ozokwa, iji okpukpu kporo na carot na-egbochi erimeri abụba n'ime imeju.
Karọt - 300 g
Chiiz cheese (ọkacha mma 5% abụba) - 300 g
Mịrị vaịn - abụọ tablespoons.
Na-asacha mịrị, wee wụsa mmiri mmiri na-ahapụ maka ihe dị ka nkeji 5. Mgbe nke ahụ gasịrị, wụpụ mmiri ahụ ma kpoo mkpụrụ vaịn na ákwà.
Richaa carrots, bee, grate ma tinye n'ime akpa na curd. Mix ọma.
Tinye mmanụ aṅụ na mịrị amị na ngwakọta. Nwegharịa ọzọ.
A gwara onye na-eri nri a ka o jiri nri rie 200-250 g.
Otu n'ime ọrụ ndị dị na mgbochi nke adịghị ike bụ carrots, nke a na-etinye na mmiri ara ehi.
Carrots (gwakọtara na ezi grater) - abụọ tablespoons.
Mmiri ara ehi (ehi) - 200 ml.
Grate carrots na ezi grater, mgbe ahụ tinye na saucepan, tinye mmiri ara ehi ma tinye stovu ọkụ.
Ozugbo ọdịnaya nke stew pan obụpde, ọ dị mkpa iji gbanwee okpomọkụ ahụ ma ọ bụrụ na ọ dịkarịa ala ma regharịa maka minit 10 ọzọ.
Ndị na-eri nri na-atụ aro ịṅụ mmanya 100 grams kwa ụbọchị, ọkacha mma n'ụtụtụ. N'okwu a, otu awa tupu mmanya a achọọ ka ị rie nri ụtụtụ.
Dika nnyocha nke ndi sayensi America gosiri n'oge gara aga, ojiji nke ihe omumu kariri di iche iche nwere mmetụta bara uru na ike mmadu.
Otú ọ dị, ọ bara uru icheta nke ahụ E kwesịghị ịzụta ihe ọṅụṅụ, ọ ga-eji aka gị kwadebe ya na ka mma mgbaze, ọ na-achọsi ike ka ị jikọta ya na celery, bekee ma ọ bụ apple apple. Jiri agwakọta nke kachasị mma na nri ụtụtụ. Ọnụ ego kachasị elu bụ 1 cup.
Salad a ga-enyere aka ịnagide ịda mbà n'obi na ịgba akwụna. A na-egosi ndị mmadụ karịsịa mgbe ọzụzụ ịgba chaa chaa, ebe ọ na-enye anụ ahụ nri na micronutrients.
Carrots - iberibe anọ.
Apụl - atọ iberibe.
Ngwakọta nke mkpụrụ osisi a mịrị amị - otu narị gram.
Walnuts - otu narị grams.
Ude ude (pasent nke abụba dị na nghọta) - 50 grams.
Na-asa carrots juputara ma kpoo ha, ma ghaa ha na grater. Akpụ osisi bee n'ime cubes. Gbakwunye ihe niile na ike zuru ezu.
Iberibe mkpụrụ ma tinye ebe a na-etinye carrots na chopped sliced.
Mkpụrụ osisi a mịrị amị na-asacha nke ọma, mgbe ahụ wụsa mmiri na-esi na mmiri, chere ruo minit 5 ma gbanye mmiri. Na-esote, kpọrọ nkụ n'elu ákwà, tinyezie na apụl, mkpụrụ na carrots.
A na-atụ aro ka ị jiri ude obi ụtọ dị ka mgbakwasa. Nhọrọ, ị nwere ike dochie ihe oriri ma ọ bụ mmanụ oliv.
Ndị ọkachamara na-eri nri na-adụ ọdụ iji salad a maka nri ụtụtụ ma ọ bụ n'oge ọ bụla ọ bụla achọrọ oge 2 awa tupu ọzụzụ egwuregwu, ma ọ bụ mgbe ha gasịrị 2-2.5 awa mgbe e mesịrị.
Carrots nwere ọtụtụ ihe bara uru maka ahụ nwoke na ihe ndị na-achọpụta. Elegharala mgbakwunye nke mgbọrọgwụ a na-atọ ụtọ na nri gị kwa ụbọchị, karịsịa ebe ọ bụ na ntụziaka nke efere na ihe oriri a dị nnọọ iche.
Maka ọganihu zuru oke na ahụike, gụnyere iji meziwanye ike, ndị ọkachamara na-atụ aro na -eme ka carrots na ihe ọṅụṅụ ya dịkarịa ala ọtụtụ ugboro n'izu. N'ibido ya na ndụ dị mma, ị ga-ahụ ihe dị mma mgbe izu ole na ole gasịrị.
Atụmatụ kachasị maka nlekọta na akuku cherry
Kedu ka esi eto ume nwa, na-akụ ma na-elekọta osisi
Nabata Na-akụ ma na-elekọta - nnukwu ọnọdụ na obi!
Chickens Maran: àgwà, ndụmọdụ maka ịchebe na ịzụlite
Ezigbo anụ ọhịa: nkọwa na foto
Ihe niile gbasara ịgba lumbago
Osisi ego - esi akụ igba n’ụlọ
Na-eto eto agave na-enweghị atụ n'ọhịa ma na-atụ aro maka nlekọta ụlọ na foto
Nkọwa na foto nke ụdị willow kachasị ewu ewu
Fenugreek: ebe o na etolite, ihe bara uru, otu esi eji ma jiri
Nzọụkwụ maka ụlọ ahịa griinụ: ego na enweta ego